Tingaramba Sei ‘Takamirira?’ | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Tingadzidzei pamuenzaniso waMika?
Takamirira kuona zviitiko zvipi?
Ndezvipi zvimwe zvatingaita kuratidza kuti tinoonga mwoyo murefu waJehovha?
1. Chii chingaita kuti tione sokuti mugumo wanonoka?
UMAMBO hwaMesiya pahwakagadzwa muna 1914, mazuva okupedzisira enyika yaSatani akabva atanga. Pakarwiwa hondo kudenga, Jesu akakanda Dhiyabhorosi nemadhimoni ake panyika. (Verenga Zvakazarurwa 12:7-9.) Satani anoziva kuti asarirwa ‘nenguva pfupi.’ (Zvak. 12:12) Zvisinei, patova nemakumi emakore kubvira pakatanga “nguva” iyoyo, uye vamwe vangaona sokuti mazuva okupedzisira anyanya kureba. Tava kuona sokuti Jehovha anonoka kuparadza nyika ino here?
2 Kutadza kumirira kunogona kuva nengozi nokuti kungaita kuti tiite zvinhu tisina kufunga. Tingaramba sei takamirira? Nyaya ino ichatibatsira nokupindura mibvunzo inotevera. (1) Tingadzidzei pakumirira kwakaita muprofita Mika? (2) Zvinhu zvipi zvichaitika zvicharatidza kuti nguva yedu yokumirira yava kupera? (3) Tingaratidza sei kuti tinoonga mwoyo murefu waJehovha?
3. Zvinhu zvakanga zvakamira sei muIsraeri mumazuva aMika?
3 Verenga Mika 7:2-6. Muprofita waJehovha ainzi Mika, akaona kunamata kwevaIsraeri kuchidzikira kusvikira kwaipa zvakanyanya paitonga mambo akaipa, Ahazi. Mika akati vaIsraeri vasina kutendeka vainge vakaita “segwenzi rine minzwa” uye “ruzhowa rweminzwa.” Sezvinongoita gwenzi rine minzwa uye ruzhowa rweminzwa zvinokuvadza munhu wose anopinda pazviri, vaIsraeri ivavo vasina kutendeka vaikuvadza munhu wose aiuya kwavari. Kusatendeka ikoko kwakanga kwanyanya zvokuti kunyange vanhu vomumhuri imwe chete vakanga vava kumukirana. Achiziva kuti hapana zvaaigona kuita kuti agadzirise zvinhu, Mika akaudza Jehovha zvaiva mumwoyo make. Akabva amirira Mwari kuti agadzirise zvinhu. Mika aiva nechokwadi chokuti Jehovha aizopindira kana nguva yake yakwana.
4. Matambudziko api atinosangana nawo?
4 Kungofanana naMika, tinoraramawo nevanhu vanongozvifunga. Vakawanda ‘havaongi, havana kuvimbika uye havana rudo rukuru rwokuzvarwa narwo.’ (2 Tim. 3:2, 3) Zvinotishungurudza chaizvo patinoona vatinoshanda navo, vokuchikoro uye vavakidzani vedu vachiratidza kuti vanongozvifunga. Zvisinei, vamwe vashumiri vaMwari vane dambudziko rakatokura. Jesu akati vateveri vake vaizopikiswa nevomumhuri uye akashandisa mashoko akafanana neari pana Mika 7:6. Akati: “Ndakauya kuzoita kuti pave nokupesana, pakati pomwanakomana nababa vake, mwanasikana naamai vake, uye muroora navamwene vake. Chokwadi, vavengi vomunhu vachava vanhu veimba yake.” (Mat. 10:35, 36) Zvakaoma chaizvo kutsungirira kusekwa uye kushorwa nevanhu vomumhuri vasingadaviri zvatinotenda! Kana tikasangana nemuedzo wakadaro, ngatisakanda mapfumo pasi. Asi ngatirambei takavimbika uye tomirira Jehovha kuti agadzirise zvinhu. Kana tikagara tichimukumbira kuti atibatsire, achatipa simba uye uchenjeri zvatinoda kuti titsungirire.
5, 6. Mika akakomborerwa sei naJehovha, asi haana kuzoonei?
5 Jehovha akakomborera Mika nemhaka yokumirira kwaakaita. Mika akaona Mambo Ahazi noutongi hwake hwakaipa zvichiparara. Akaona mwanakomana waAhazi, Mambo Hezekiya aiva akanaka achitanga kutonga uye achiita kuti kunamata kwechokwadi kutangezve. Uyewo, zvakanga zvataurwa naJehovha achishandisa Mika nezveSamariya zvakazadziswa vaAsiriya pavakakunda umambo hwokumusoro hwaIsraeri.—Mika 1:6.
6 Zvisinei, Mika haana kuona zvose zvaakanga afemerwa naJehovha kuti aprofite zvichizadziswa. Somuenzaniso, akanyora kuti: “Nemazuva okupedzisira gomo reimba yaJehovha richasimbiswa kwazvo kupfuura misoro yemakomo, richakwidziridzwa kupfuura zvikomo; uye marudzi achadirana achienda kwariri. Marudzi mazhinji achaenda achiti: ‘Uyai, ngatikwirei kugomo raJehovha.’” (Mika 4:1, 2) Mika akafa pachine makore akawanda uprofita ihwohwo husati hwazadziswa. Asi ainge akatsunga kuramba akavimbika kuna Jehovha kunyange kusvika pakufa, pasinei nezvaiitwa nevanhu vaairarama navo. Izvi zvakaita kuti anyore kuti: “Marudzi ose, achafamba rumwe norumwe nezita ramwari warwo; asi isu, tichafamba nezita raJehovha Mwari wedu nokusingagumi, kunyange nokusingaperi.” (Mika 4:5) Mika akamirira panguva dzakaoma nokuti ainyatsovimba kuti Jehovha aizozadzisa zvose zvaakavimbisa. Muprofita uyu akatendeka aivimba naJehovha.
7, 8. (a) Nei tiine chikonzero chokuvimba naJehovha? (b) Chii chichaita kuti nguva ikurumidze kufamba?
7 Tinovimbawo naJehovha saizvozvo here? Tine chikonzero chakanaka chokuti tidaro. Takaona uprofita hwaMika huchizadzika. ‘Mumazuva ano okupedzisira,’ mamiriyoni evanhu vanobva kumarudzi ose nemadzinza nendimi ari kuuya “kugomo reimba yaJehovha.” Pasinei nokuti vakabva kumarudzi asingawirirani, vanamati ava vakapfura “mapakatwa avo kuti ave miromo yemagejo,” uye havadi ‘kudzidzazve kurwa.’ (Mika 4:3) Chokwadi iropafadzo yakakura kuva mumwe wevanhu vaJehovha vane rugare!
8 Ichokwadi kuti tinoda kuti Jehovha akurumidze kuparadza nyika ino yakaipa. Asi kuti tikwanise kumirira, tinofanira kuona zvinhu semaonerwo azvinoitwa naJehovha. Akasarudza zuva raanoda kutonga vanhu achishandisa “munhu waakagadza,” Jesu Kristu. (Mab. 17:31) Asi izvozvo zvisati zvaitika, Mwari ari kupa vanhu vemarudzi ose mukana wokuwana “zivo yakarurama pamusoro pechokwadi,” voita zvavanenge vadzidza, vobva vapona. Upenyu hwevanhu huri pangozi. (Verenga 1 Timoti 2:3, 4.) Kana takabatikana kubatsira vamwe kuti vawane zivo yakarurama pamusoro paMwari, hatizombooni sokuti Jehovha ari kunonoka kuparadza nyika ino. Nguva yacho ichangoerekana yasvika. Paichasvika, tichafara chaizvo kuti takaita basa rokuparidza Umambo tichishingaira!
ZVII ZVICHARATIDZA KUTI NGUVA YEDU YOKUMIRIRA YAVA KUPERA?
9-11. Mashoko ari pana 1 VaTesaronika 5:3 akazadziswa here? Tsanangura.
9 Verenga 1 VaTesaronika 5:1-3. Munguva pfupi iri kuuya, marudzi achati “Rugare nokuchengeteka!” Kuti kuzivisa uku kusazoitika takarivara, tinofanira kuramba “takamuka, takasvinura.” (1 VaT. 5:6) Kuti tirambe takamuka pakunamata, ngationgororei zvakaitika zvinoratidza kuti kuzivisa uku kwava pedyo.
10 Pakapera hondo yenyika yokutanga neyechipiri, marudzi akashevedzera nezverugare. Hondo yenyika yokutanga payakapera, pakaumbwa Sangano Renyika Dzakabatana netarisiro yokuunza rugare. Pakazoperawo hondo yenyika yechipiri, vakawanda vakanga vava kuvimba neSangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose kuti raizounza rugare panyika. Vatungamiriri venyika nevezvitendero vange vachitarisira kuti masangano iwayo achaunza rugare panyika. Somuenzaniso, muna 1986, Sangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose rakazivisa kuti gore iri raiva Gore Remarudzi Akawanda Rorugare. Mugore iroro, vatungamiriri venyika dzakawanda nevezvitendero vakabatana nemutungamiriri weChechi yeRoma kuAssisi, Italy kuti vanyengeterere rugare.
11 Zvisinei, kuzivisa ikoko kworugare nokuchengeteka kana kuti kumwe kwakafanana naikoko, hakusi kuzadziswa kweuprofita huri pana 1 VaTesaronika 5:3. Nei tichidaro? Nokuti “kuparadzwa kusingatarisirwi” kwakafanotaurwa hakusati kwaitika.
12. Chii chatinoziva nezvekuzivisa kwokuti “Rugare nokuchengeteka”?
12 Ndiani achazivisa kuti “Rugare nokuchengeteka”? Chii chichaitwawo nevatungamiriri vechiKristudhomu uye vezvimwe zvitendero? Vatungamiriri venyika dzakasiyana-siyana vachabatanidzwawo sei pakuzivisa uku? Magwaro haana zvaanotaura panyaya iyi. Chatinoziva ndechokuti kuzivisa kwacho kuchange kuri kwenhema pasinei nokuti kwakaita sei kana kuti kungaita sekwechokwadi. Nyika ino yakaipa icharamba ichitongwa naSatani. Yaora zvokuti haichagadziriki. Chingava chinhu chinosuwisa chaizvo kana mumwe wedu akabvuma nhema idzodzo dzaSatani opindira mune zvematongerwo enyika!
13. Nei ngirozi dzakabata mhepo dzokuparadza?
13 Verenga Zvakazarurwa 7:1-4. Patiri kumirira kuzadziswa kwa1 VaTesaronika 5:3, ngirozi dzine simba dzakabata mhepo dzokuparadza dzokutambudzika kukuru. Dzakamirirei? Kuti “varanda vaMwari wedu” vakazodzwa vatange vaiswa chisimbiso chokupedzisira, sezvakataurwa nomuapostora Johani. * Kana kuiswa chisimbiso ikoko kwangopera, ngirozi dzichasiya mhepo dzokuparadza. Chii chichabva chaitika?
14. Chii chinoratidza kuti kuparadzwa kweBhabhironi Guru kwava pedyo?
14 Bhabhironi Guru, mubatanidzwa wezvitendero zvenhema zvose, richaparadzwa. “Vanhu nemapoka evanhu nemarudzi nendimi” vachatadza kunyatsoritsigira. Tiri kutoona uchapupu hwokuti kuparadzwa kwaro kwava pedyo. (Zvak. 16:12; 17:15-18; 18:7, 8, 21) Nhau dziri kutoratidza kuti zvitendero uye vatungamiriri vezvitendero vari kuwedzera kupikiswa. Kunyange zvakadaro, vatungamiriri veBhabhironi Guru vanoona sokuti hapana kana chinovawana. Vakarasika chaizvo! Kana kuzivisa kwokuti “Rugare nokuchengeteka!” kwaitwa, masangano aSatani ezvematongerwo enyika achangoerekana apandukira chitendero chenhema ochitsakatisa. Bhabhironi Guru harizombovipozve! Chokwadi zvakakodzera kuti tirambe takamirira zviitiko izvozvo zvinokosha.—Zvak. 18:8, 10.
TINGARATIDZA SEI KUTI TINOONGA MWOYO MUREFU WAMWARI?
15. Nei Jehovha asati aparadza nyika ino?
15 Pasinei nokuti vanhu vari kuzvidza chaizvo zita rake, Jehovha ari kumirira nguva yakakodzera kuti aparadze nyika ino. Jehovha haadi kuti munhu anoda chokwadi aparadzwe. (2 Pet. 3:9, 10) Ndiwo maonero atinoitawo here? Zuva raJehovha risati rasvika, tinogona kuratidza kuti tinoonga mwoyo murefu wake nokuita zvinotevera.
16, 17. (a) Nei tichifanira kubatsira vaya vasingachaiti mabasa echiKristu? (b) Nei iye zvino iri nguva yokuti vasingachaiti mabasa echiKristu vadzoke kuna Jehovha?
16 Batsira vaya vasingachaiti mabasa echiKristu. Jesu akati kudenga kunova nomufaro kana gwai rimwe chete rinenge rarasika rikawanikwa. (Mat. 18:14; Ruka 15:3-7) Chokwadi Jehovha ane hanya chaizvo nevanhu vose vakaratidza kuti vanoda zita rake, kunyange zvazvo vasiri kuita mabasa echiKristu iye zvino. Patinobatsira vanhu vakadaro kudzoka muungano, tinoitawo kuti Jehovha nengirozi dzake vafare.
17 Uri mumwe wevaya vasiri kuita mabasa echiKristu here? Zvimwe wakagumburwa nemumwe munhu ari muungano uye wakabva warega kuwadzana nesangano raJehovha. Sezvo pangava papera nguva kubva izvozvo zvaitika, zvibvunze kuti: ‘Upenyu hwangu hwawedzera kuva nechinangwa uye ndava kunyatsofara here? Jehovha ndiye akandigumbura here kana kuti ndemumwewo munhu asina kukwana? Jehovha Mwari akambondiitira zvakaipa here?’ Chokwadi agara achitiitira zvakanaka. Kunyange zvazvo tisiri kurarama maererano nokuzvitsaurira kwedu, anotipa zvinhu zvakanaka. (Jak. 1:16, 17) Munguva pfupi iri kuuya, zuva raJehovha richasvika. Iye zvino inguva yokudzokera kuna Baba vedu vokudenga uye muungano. Iyi ndiyo chete nzvimbo yakachengeteka mumazuva ano okupedzisira.—Dheut. 33:27; VaH. 10:24, 25.
Vanhu vaJehovha vanoita zvose zvavanogona kuti vabatsire vasingachaiti mabasa echiKristu kuti vadzoke kuna Jehovha (Ona ndima 16, 17)
18. Nei tichifanira kutsigira vaya vari kutitungamirira?
18 Ramba uchitsigira vaya vari kutungamirira. Mufudzi ane rudo, Jehovha, anotitungamirira nokutidzivirira. Akagadza Mwanakomana wake kuti ave Mufudzi Mukuru wemakwai ake. (1 Pet. 5:4) Vakuru vari muungano dzinopfuura 100 000 vanofudza gwai rimwe nerimwe raMwari. (Mab. 20:28) Kana tikaramba tichitsigira vaya vakasarudzwa kuti vatungamirire, tinoratidza kuti tinoonga Jehovha naJesu nezvose zvavakatiitira.
19. Tingaita sei kuti tisakundwa naSatani?
19 Ngatiswedere pedyo nevatinonamata navo. Izvi zvinorevei? Kana uto rakanyatsodzidziswa rikarwiswa nomuvengi, masoja anoswedera pedyo nomumwe nomumwe. Izvi zvinoita kuti muvengi asatombopinda. Satani ari kuwedzera kurwisa vanhu vaMwari. Ino haisi nguva yokuti tirwisane isu pachedu. Inguva yokuti tiswedere pedyo nomumwe nomumwe, tisatarisa zvikanganiso zvevamwe uye tiratidze kuti tinovimba noutungamiriri hwaJehovha.
Ino inguva yokuti tibatane pakurwisa Satani nemadhimoni ake (Ona ndima 19)
20. Tinofanira kuitei iye zvino?
20 Dai tose tikaramba takamuka pakunamata toramba takamirira. Ngatirambei takamirira kuzivisa kwokuti “Rugare nokuchengeteka!” uye kuiswa chisimbiso chokupedzisira kwevakasarudzwa. Kana izvozvo zvaitika, ngirozi ina dzichasiya mhepo dzokuparadza uye Bhabhironi Guru richaparadzwa. Patiri kumirira zviitiko izvi zvinokosha, ngatibvumei kutungamirirwa nevakagadzwa musangano raJehovha. Ngatibatanei kuti tirwise Dhiyabhorosi nemadhimoni ake! Ino inguva yokuti titeerere zvatakakurudzirwa nemunyori wepisarema kuti: “Shingai, mwoyo yenyu ngaisimbe, imi mose muri kumirira Jehovha.”—Pis. 31:24.
^ ndima 13 Ona Nharireyomurindi yaJanuary 1, 2007, mapeji 30-31 inotsanangura musiyano uripo pakati pekuiswa chisimbiso chokutanga pane vakazodzwa uye kuiswa chisimbiso chokupedzisira.